विदेसिनु रहर कि बाध्यता
कुन नेपाली होला जसलाई आफ्नो देशको माया नहोस । कुनै बेला म आफूलाई यति देशभक्त ठान्थेँ । मेरो नशानशामा दगुरेको रगतका कणकणमा देशको माया भरिएको छ । यस्तोसम्म लाग्थ्यो कि मलाई, देशलाई साँच्चो माया गर्ने चारजना नेपाली युवा छान्ने हो भने म पनि एउटा हो । सायद सबैलाई यस्तै लाग्ने गर्छ । हामी सबैलाई यस्तै लाग्नु पनि पर्छ । भनिन्छ, देशलाई माया नगर्नेले कसैलाई माया गर्दैन । कहाँबाट आयो ममा यति धेरै देशभक्तिको भावना ! आफैँलाई अचम्म पनि लाग्छ । कहिले त आफैँलाई प्रश्न गर्न मन लाग्छ । कतै म देशलाई चाहिने भन्दा बढी माया त गरिराखेको छैन ? यद्यपी पहिले पनि मलाई देशको माया औधी लाग्ने । सानो छँदा केटाकेटीमा पनि आफू जन्मे, हुर्केको गाउँ, ठाउँ, छर–छिमेक, आफन्त । शत्रु नै किन नहोस । टाढाको देवता भन्दा गाउँको भूत नै बेस ठान्ने म सायद देशको माया मुटुभरि भएकै कारण आज म आफ्नै देशमा छु । नत्र म यतिबेला युरोपको कुनै देश पोर्चुगल वा पोल्याणमा हुँन्थेँ ।
युवा मन ता हो । भत्कदो रहेछ बेलाबखत जति कठोर भएपनि । कुनै बेला एक थोपा रगत चुहाएपनि,एक थोपा पसिना बगाएपनि,एक थोपा आसुँ झारेपनि आफ्नै देशको माटोमा चुहाऔं,बगाऔं वा झारौं भन्ने यो मन एकाएक बद्लियो । देशको मायाले मात्र पनि जिउन सकिदो रहेनछ भने जस्तो लाग्न थाल्यो । साथी–भाइ, छर–छिमेक, इस्ट–मित्र सबै विदेश । कसैको उन्नति, प्रगति कसैको अधोगति जे भएपनि आ–आफ्नो भाग्य हो । कसैले त्यहीँ कमाएका छन् । कोही त्यहीँबाट खालि हात फर्कने पनि छन् । आफू त भाग्यमा उति विश्वास नगर्ने मानिस । कहिले काहीँ त साँच्चै भाग्य हुँदो रहेछ कि क्याहो ? कहिले काहीँ जीवनका मोडहरूमा उभिएर हेर्दा यस्तो पनि लाग्छ । कहिले काहीँ त विचार पनि धरमराउँछ । मन पनि विटुलिन्छ । दिनदिनै देशको युवा शक्ति विदेसिने क्रम बढ्दै गएपछि त लहरै चल्न थालेको हो नेपाली युवा–युवतीहरूमा विदेसिने । विदेश गएर दुई–चार वर्ष दुःख गर्दा खाइजिवीकाको बाटो हुन्छ भने किन नगर्ने ? यही सोचले म पनि बाटो लागेको थिएँ । आजको जीवन शैली, बढ्दो महङ्गी, बेरोजगार समस्या, गरिवी आदि कारणले गर्दा नै आजका नेपाली युवाले विदेसिन बाध्य हुनुपरेको छ । आफू जन्मे, हुर्के, पढे, बढेको गाउँ, ठाउँ, आफन्त, छर–छिमेक, घर–परिवार छोडेर विदेसिने रहर कसको पो हुन्छ र । बढ्दो महङ्गीका कारण सामान्य जीवन धान्नु वा दैनिक गुजारा चलाउनु पनि कमाउनु जमाउनु जस्तै भइसकेको छ हाम्रो देशमा । मासिक दस–पन्ध्र हजारसम्म कमाउने बाटो आफ्नै देशमा हुने हो भने पनि जो कोही विदेसिने थिएन । दिनहुँ विदेसिने देशको युवाशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरेर विदेश जानबाट रोक्ने नारा र प्रतिवद्धता जुनसुकै राजनीतिक पाटीले गरेपनि त्यो यथार्थ र व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन । जसका कारण देशको युवाशक्ति दिनहुँ विदेसिने लहर बढेकोबढेकै छ । रोकिनेको ता कुरा छोडौं । कम समेत भएको छैन । दिनहुँ जसो विदेशबाट सन्दूकमा कैद भएर लास आउनु यसकै परिणाम हो ।
स्वदेशमा रोजगार नपाएपछि र आफ्नो कुनै खाइजिविकाको बाटो नभएपछि विदेसिनु आफैंमा त्यति नराम्रो कुरा होइन । सकिन्छ भने रोजगार वा कामका लागि विदेश जानु राम्रो होइन । नजानु नै बेस हो । सकिदैन भने जानु पनि उति नराम्रो चाहिँ होइन । मर्नु भन्दा त बहुलाउनु निको भने जस्तो । यसरी जाने नै हुँदा जानु भन्दा पहिले आफू जाने देश, आफूले गर्ने काम, पाउने पैसा, सुरक्षा सम्बन्धि, जाँदा लाग्ने रकम आदिका बारेमा विस्तृत बुझेर मात्र जानु पर्दछ । वैदेशिक रोजगारमा जाने आफूले पनि यस्तो अठोट गर्नुपर्छ कि म त्यहाँ गएर जस्तो सुकै कठिन काम गर्नु परे पनि गर्छु । दुई–चार वर्ष बसेर दुई–चार पैसा कमाएर ल्याउँछु । म त्यहाँ दुःख गर्न जाने हो । दुःख गर्छु भन्ने दृढ अठोट र इच्छाशक्ति बनाएर जानु पर्छ । त्यहाँ तपाइँ जतिसुकै राम्रो भएपनि तपाइँ प्यारो हुने होइन । तपाइँको काम प्यारो हुने हो । काम गर्नुृ भयो भने त्यहाँ तपाइँले पैसा पाउनु हुन्छ । काम गर्नु भएन भने पैसा पाउनु हुन्न । अझ कतिपय खाडी मुलुकहरूमा त काम गरेको पैसा पनि नदिने वा कम दिने गरेको सुनिन्छ । काम गरेपछि पैसा पाइन्छ । आफूले लिन सक्नु पर्छ । कानुनी रूपमा भएपनि जान सक्नुपर्छ । यहाँबाट जाँदै आफू जुन कामका लागि जाने हो त्यो कामका लागि आफू सक्षम छु कि छैन वा आफूले त्यो काम गर्न सकिन्छ कि सकिदैन । त्यो कुराको राम्रोसँग हेक्का राख्नु पर्छ । त्यसपछि मात्र जानु पर्छ । हल्लाको पछि दगुर्नु हुँदैन । विदेशमा काम गर्न जाने वा लाने भनेकै युवा शक्ति हो । हाम्रो देशबाट मात्र होइन । विश्वका अधिकांश गरिव राष्ट्रका गरिव जनताहरू स्वदेशमा वेरोजगार भएपछि नै विदेशमा रोजगारीका लागि जाने हो । विश्वका विभिन्न विकशित, अल्पबिकशित, विकाशोन्मुख देशका बेरोजगार नागरिक वा युवा शक्ति नजिकैका दोस्रो वा परका तेस्रो विकशित वा सम्पन्न मुलुकमा गएर काम गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्ता देशहरूमा नेपाल बाहेक भारत, चिन, फिलिपिन्स, थाइल्याण, श्रीलङ्का, भियतनाम, इण्डोनेशिया, रूस आदि थुप्रै छन् । देशको युवा शक्ति विदेसियो भनेर बेलाबेला चिच्याउनेको सङ्ख्या हाम्रो देशमा ठूलो छ । चाहे ती राजनीतिक दलका नेताहरू हन् वा देशका बौद्धिक वर्ग । शासन सत्ता आफ्नो हातमा भएको बेला समस्याको जरो पहिल्याएर त्यसको दीर्घकालीन निराकरण गर्नपटी लागिदिए कति राम्रो हुने थियो । कुरा र नाराले मात्र देशमा परिवर्तन हुने भए सायद नेपाल आजसम्ममा विश्वकै अग्र स्थानमा हुने थियो होला ।
तपाइँ कामदार, पर्यटक, व्यवशायिक वा जुनसुकै रूपमा विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भने सकेसम्म कामदारको रूपमा नजानुहोस । सक्नु हन्छ भने यहीँ केही गर्नुहोस । यहाँ खुट्टा टेक्ने ठाउँ पाउनु भएन भने मात्र जानुहोस । यसरी विदेश जाँदा पनि तपाइँले त्यहाँ बसुन्जेल सिकेका राम्रा कुराहरू त्यहाँबाट फर्कदासँगै लिएर आउनुहोस । यहाँ ल्याएर त्यसलाई उपयोग गर्नुहोस । पर्यटक वा अन्य प्रयोजनले जाँदै हुनुहुन्छ भनेपनि आफू त्यहाँ बसुन्जेल वा त्यस देशको भ्रमण गरुन्जेलको समयावधिमा सिकेका, जानेका, बुझेका राम्रा कुराहरूलाई यहाँ ल्याएर उपयोग गर्ने गर्नुहोस । यसरी तपाइँ विदेशबाट फर्कदा त्यस देशमा भएका राम्रा पक्षहरूलाई मात्र लिएर आउनुहोस् । नराम्रा पक्षहरूलाई त्यहीँ छोडेर आउनुहोस । जहाँका भएपनि राम्रा पक्षहरू मानवहितका लागि राम्रै हुन्छन् । तपाइँ पढेलेखेको युवा भएपनि अनपढ भएपनि एक पटक घुमफिरकै लागि भएपनि विदेश जानुहोस । तपाइँले त्यहाँ धेरै कुरा सिक्ने र बुझ्ने मौका पाउनु हुनेछ । धेरथोर पैसा पनि कमाउनु हुनेछ । राम्रो र इमान्दरिताका साथ काम गर्नुहोस । राम्रो र इमान्दारिताकासँग काम गर्नुभयो भने त्यहाँ तपाइँ सबैको हाइ–हाइसमेत हुनसक्नु हुन्छ । यसरी जाँदा श्रमिकको रूपमा जाने भए श्रमको मूल्य भएको देश हेरेर जानुहोस । त्यहाँ जाँदा तपाइँलाई लाग्ने रकम, त्यहाँ गएर आफूले गर्ने काम, तलव र सुरक्षा आदिका बारेमा स्पस्ट भएर बैधानिक तरिकाले मात्र जानुहोस । म त हरेक युवाले एक पटक विदेश जानु पर्छ भन्छु । त्यहाँ गएर पाँच–सात वर्ष बस्ने । केही कमाएको पैसाले त्यसपछि स्वदेशमै आएर केही गर्ने । यस्तो मनस्थितिले जानुहोस् । उतै पलायन हुने वा वर्षौवर्ष नफर्कने यो चाहिँ राम्रो प्रवृत्ति होइन । यस्तो मनस्थितिले चाहिँ विदेश नजानुहोस् । आफ्नो देश भनेको आफ्नो देश हो । आफ्नो माटो हो । आफ्नो देशको माटोको आफ्नो छुट्टै सुगन्ध हुन्छ । यो आफ्नै घर जस्तो हो । जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपी गरियसी । अर्थात जन्मदिने आमा र आफू जन्मेको ठाउँ स्वर्ग भन्दापनि प्यारो हुन्छ । विश्वको जुनसुकै कुनामा पुगेपनि नेपाली, नेपाली जस्तो भएर रहनुहोस । सधैं नेपाल र नेपालीलाई माया गर्नुहोस् ।
यदि तपाइँ रोजगारीका लागि विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भने सक्नुहुन्छ नजानुहोस् । सक्नु हुन्न जानुहोस् । कुनै निश्चित समयसम्म बसेर स्वदेश फर्कनुहोस् । उतै पलायन किमार्थ नहुनुहोस् । फर्कदा त्यहाँका राम्रा पक्षहरू सँगै लिएर फर्कनुहोस् । नराम्रा पक्षहरूलाई त्यहीँ छोडेर आउनुहोस् । यहाँ आएर राम्रा पक्षहरू र ज्ञानगुनका कुराहरूको उपयोग गर्नुहोस् । हरेक मुलुक पढेका वा नपढेकाहरूकालागि पनि एउटा विशाल किताव हो । त्यहाँबाट तपाइँले धेरै कुरा सिक्नसक्नु हुन्छ । त्यहाँ पढेकाले मात्र होइन । नपढेकाले पनि जान्ने, बुझ्ने र सिक्ने ज्ञान–गुनका कुराहरू धेरै हुन्छन् । सबै कुराहरू पढेर मात्र जानिने हँदैनन् । देखेर, भोगेर जानिने कुराहरू पनि धेरै हुन्छन् । ती कुराहरूलाई फर्कदासँगै लिएर फर्कनुहोस् । यस्ता राम्रा पक्षहरूलाई स्वदेशमा उपयोग गर्नुहोस् । गराउनुहोस् । यस्ता असल कुराहरूले हामी र हाम्रो समाज र राष्ट्र्को हितै गर्दछ । यो एउटा असल नागरिकको दायित्व पनि हो ।